आईपीएलः हैदरावादले दिल्ली डेयरडेभिल्सलाई ९ विकेटले हराएको
इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा सनराइजर्स हैदरावादले दिल्ली डेयरडेभिल्सलाई ९ विकेटले हराएको छ ।
फ्रेन्च कपको उपाधि पीएसजीले जित्यो , उपाधी उचाल्न लेसका क्याप्टेन पनि सहभागी
पेरिस सेन्टजर्मेन (पीएसजी)ले फ्रेन्च कपको उपाधि जितेको छ । मंगलबार राति लेस हर्बियर्सलाई २-० ले हराउँदै पीएसजीले उपाधि उचालेको हो ।
दिल्लीलाई हराउँदै हैदरावाद शीर्ष स्थानमा
क्रिस गेलको खुलासा : बेंगलोरले टिममा राख्छु भनेर झुट बोल्यो
काठमाडौं । चार खेलमा २५२ रन । यो सिजन ‘इण्डियन प्रिमियर लिग’ (आईपीएल) मा क्रिस गेलको ब्याटले धमाका मच्चाइरहेको छ ।
शितगंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर -२ सितापुर सोमतिर्थ बजारमा अर्घाखाँची जिल्ला स्तरीय भलिवल प्रतियोगिता हुने
बिष्णु क्षेत्री,सितापुर |अर्घाखाँचीबुलेटिन |अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिका वार्ड नम्बर -२ सोमतिर्थ बजारमा "सितापुरमा नव युवा संयुक्त समितिको आयोजकत्वमा बिभिद सांस्कृतिक कार्यक्रम र बाजा गाजाको साथमा अर्घाखाँची जिल्ला स्तरीय भलिवल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
आईपीएल:धोनीले राखे सर्वाधिक रन बनाउने कप्तानको रेकर्ड
सबैभन्दा धेरै रन बनाउने कप्तानको रेकर्ड महेन्द्रसिंह धोनीले राखेका छन्
१०४ सदस्य राष्ट्रलाई टी–२० मान्यता !
भूमिकास्थान नगरपालिका अन्र्तर वडा स्तीय क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न
विनोद गैरे ,नुवाकोट |अर्घाखाँचीबुलेटिन |दिपज्योती यूवा परिषद भुमिकास्थान नगरपालिका–नुवाकोटको आयोजना तथा भूमिकास्थान नगरपालिकाको कार्यालय नुवाकोट, अर्घाखाँचीको समन्वयमा बैसाख १ गते देखि संचालित अन्र्तर वडा स्तीय क्रिकेट प्रतियोगिता आज सम्पन्न भएको छ ।
कोरियामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पेनशिपमा नेपालको तर्फबाट सुबाश पाण्डेले प्रतिनिधित्वो गर्ने
काठमाडौं ।मे ६ मा कोरिया हुन गैरहेको ICN आइ कम्प्लिट नेचुरल अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पेनशिपमा नेपालको तर्फबाट सुबाश पाण्डेले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन ५० देशको सहभागिता रहने उक्त प्रतियोगीतामा सुबाश पाण्डेले सहभागिता जनाउने भएका हुन्।
भूमिकास्थान नगरपालिका अन्र्तर वडा स्तीय क्रिकेट प्रतियोगिताकाे उद्घाटन
विनाेद गैरे भूमिकास्थान|अर्घाखाँचीबुलेटिन |भूमिकास्थान नगरपालिका अन्र्तर वडा स्तीय क्रिकेट प्रतियोगिताकाे उद्घाटन
भूमिकास्थान नगरपालिकाको संमन्वय तथा नुवाकोट दीपज्योती यूवा परिषदको आयोजनामा नगरपालिका स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने
राजकुमार श्रेष्ठ, भुमिकास्थान |भूमिकास्थान नगरपालिकाको संमन्वय तथा नुवाकोट दीपज्योती यूवा परिषदको आयोजनामा नगरपालिका स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हुने
भारतीय क्रिकेट खेलाडी ऋद्धिमान शाहले राखे बिश्व रेकर्ड: तोडे बिस्पोटक बल्लेबाज क्रिस गेलको रेकर्ड
काठमाडौं । आईपीएलको पूर्वसन्ध्यामा एक भारतीय क्रिकेटरले २० बलमा शतक प्रहार गर्दै हलचल मचाएका छन् । टिम इन्डियाका विकेटकिपर ऋद्धिमान साहाले २० बलमा शतक हानेका हुन् ।
आईपीएल टिम दिल्ली डेडरडेभिल्सले गर्यो सन्दिप लामिछानेको जर्सी सार्वजनिक
काठमाडौं । आईपीएल टिम दिल्ली डेडरडेभिल्सले काठमाडौं आएर सन्दिप लामिछानेको जर्सी सार्वजनिक गरेको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै जर्सी सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो तर, राखेप सदस्य सचिव केशव विष्टको उपस्थितिमा दिल्लीका सीईओ हेमन्त डुआले जर्सी हस्तान्तरण गर्‍यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय मान्यता हासिल सफल पार्न नेपालि क्रिकेट जगतका ‘हिरो’हरु स्वदेश फर्किए
काठमाडौं– आइसीसी विश्वकप छनोटमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय मान्यता हासिल गर्न सफल नेपाली क्रिकेट टोली आज स्वदेश फर्किएको छ ।
पपुवा न्युगिनी बिरुद्ध नेपालको ६ विकेटले शानदार जित :आजको जितको श्रेय बोलर सन्दीप र दिपेन्द्रलाइ
काठमाडौँ । आइसीसी विश्वकप छनौट अन्तर्गतको प्लेअफ खेलमा दीपेन्द्र सिंह ऐरीले बल र ब्याट दुवैमा चम्किएपछि नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई ६ विकेटले पराजित गरेको छ ।
नेपालको तर्फबाट सन्दिप लामिछानेको घातक बोलिंग:पपुवा न्यूगिनीले नेपाललाई दियो ११५ रनको लक्ष्य
काठमाडौं| न्यूगिनीले नेपाललाई दियो ११५ रनको लक्ष्य नेपालले केहीबेरमा जवाफी ब्याटिङ गर्नेछ । टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको पपुवा न्यूगिनीले ओभरमा सबै विकेट गुमाएर ११४ रन बनायो ।
नेपाललाई चौथो सफलता, सन्दिप लामिछानेलेनै लिए विकेट
काठमाडौं|विश्वकप क्रिकेट छनोटको पहिलो प्ले अफमा पपुवा न्यूगिनिबिरूद्ध खेलिरहेको नेपालले चौथो सफलता हात पारेको छ।
विश्वकप छनोटः अफगानिस्तानसँग नेपालको लाजस्पाद हार
नेपालका दिपेन्द्रले २ विकेट लिँदा करण केसी र सन्दिप लामिछानेले १-१ विकेट लिएका छन् । सुपर सिक्सको सम्भावना अझै छ ? अर्को खेलमा हङकङ जिम्बाब्वेसँग हार नजिक छ ।
नेपालले लियो अफनानिस्तानको तेस्रो विकेट
काठमाडौं । विश्वकप छनौट प्रतियोगिताको अफनानिस्ताविरुद्धको खेलमा नेपालले तेस्रो विकेट लिएको छ ।
नेपालले अफगानिस्तानलाई दियो जितको लागि १९५ रनको लक्ष्य
काठमाडौं|जिम्बाम्बेमा जारी आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप छनोट क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गतको अफगानिस्तानविरूद्ध नेपालले १९५ रनको लक्ष्य दिएको छ।
विश्वकप छनोटः नेपालले सातौं विकेट गुमायो
काठमाडौं । विश्वकप छनोट अन्तरगत अहिले नेपाल र अफगानिस्तान खेलिरहेका छन् ।
विश्वकप छनोटः नेपालले पहिलो विकेट गुमायो
काठमाडौं । विश्वकप छनोटको अफगानिस्तानविरुद्धको खेलमा नेपालले पहिलो विकेट गुमाएको छ । ओपनर अनिलकुमार साह मात्र ७ रनमा आउट भए ।
विश्वकप छनोटमा नेपालको दोस्रो हार :दोस्रो हारसँगै सुपर सिक्समा पुग्ने लक्ष्यमा धक्का
काठमाडौं । विश्वकप छनोट क्रिकेटमा स्कटल्याण्डले नेपाललाई ४ विकेटले हराएको छ । दोस्रो हारसँगै सुपर सिक्समा पुग्ने नेपालको लक्ष्यमा धक्का लागेको छ ।
जिम्बाब्वेविरुद्ध ४० रन बनाएर पारस खड्का आउट
काठमाडौं । विश्वकप क्रिकेट छनोट खेलमा जिम्बाब्वेविरुद्धको खेलमा कप्तान पारस खड्का ४० रन बनाएर आउट भएका छन् । ३ सय ८१ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा आक्रामक ब्याटिङ गरेका कप्तान खड्का ३७ बलमा ४० रन जोडेपछि आउट भए । उनले ८ चौका प्रहार गरेका थिए ।